Sakhe uhlobo olutsha lwe Ilanga ElikwiSelfowuni, ikunika ngokuthe ngqo ukuKhethekileyo okwenzelwe wena Ixesha Lelanga,
le wotshi Yelanga isebenza kuwo wonke umhlaba kunye nesikhangeli se-intanethi kwifowuni yakho ephathekayo kunye nekhompyuter ukuba iisetingi zokumisa i-GPS zivuliwe.
Fumana elona xesha lokutshona Kwelanga kufutshane nam (wena)
Kunqabile ukuba ilanga lokwenyani, ixesha lelanga kunye nexesha lendawo yakho yexesha lifana.
Le wotshi Yelanga ikunika ixesha elililo lokwenene emva kokutshona Kwelanga ngexesha lasebusuku.
iwotshi Yelanga, Ixesha Eliyinyani Lelanga kunye nexesha lokubala ukuya ekutshoneni Kwelanga kunye nokuphuma kwalo kule webhusayithi – Ixesha Eliyinyani Lelanga.
Izibonelelo Ngale Wotshi Yelanga:
Abasebenzi Beenqwelomoya: Xa ufika kumda wexesha elitsha emini okanye ngexesha lasebusuku, ungayisebenzisa le wotshi Yelanga ukujonga ukuba lingakanani ixesha elishiyekileyo Ukutshona Kwelanga okanye Ukuphuma Kwelanga.
Unokubona ukuba ubusuku okanye imini iyakuba nde kangakanani kwaye oku kuyanceda ukuba ucwangcise ishedyuli yakho yokulala kude kube yindiza elandelayo.
Abakhenkethi: Ngale wotshi Yelanga kulula ukujonga ixesha lendawo kunye nexesha eliyinyani Lelanga ukuba ungathanda ukutshisa ilanga,
zikhusele okanye ukhusele abantwana kwimitha ye-UV nasekutshisweni lilanga emini emaqanda.
Abafoti: Ngalesi siqendu unokuqikelela ukuba uza kuba nini kwindawo efanelekileyo ukuze ufumane olona shoti lungcono lokutshona Kwelanga.
Intlanzi: Iintlanzi zihlala zisitya ngcono ekutshoneni Kwelanga nasekuphumeni Kwelanga, xa usenza isibali Selanga sokwenene ungaqinisekisa ukuba uza kuba kwindawo elungileyo, xa iintlanzi zitya.
Abahamba Ngeenyawo: Uyabona ukuba kusele ixesha elingakanani kude kutshone ilanga ukuze uqiniseke ukuba ufika ekhaya ukhuselekile ngaphambi kokuba kube mnyama.
Abazingeli: Izilwanyana zihamba kakhulu ngorhatya nasekuseni, ngexesha lokutshona Kwelanga nasekuphumeni Kwelanga.
Abathandi: Unokuthatha umntu omthandayo ukonwabela Ukutshona Kwelanga kunye nexesha leSolar ixesha ungakhangela ukuba ulishiye ixesha elingakanani Ukutshona Kwelanga.
Inkolo: Kwiinkolo ezininzi kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba ilanga litshona nini okanye liphuma nini, ngenxa yamaxesha okuthandaza nokuzila ukutya.
Uluntu: Le wotshi Yelanga ivumela bonke abantu abasemazantsi okanye emantla ehlabathi ukuba bajonge ubude bemini nobusuku njengoko besahluka imihla ngemihla imini yonke enyakeni.
Kumazwe aneXesha lokuGcina kwemini, kukho umahluko ongaphezulu kweyure phakathi kweXesha laseKhaya kunye nexesha eliyinyani Lelanga.
Ulwazi Ngendawo Yelanga
Zama iwotshi Yelanga ngexesha lokwenyani
Ixesha Eliyinyani Lelanga, Ukutshona Kwelanga, Ukuphuma Kwelanga, Iwotshi Yelanga Eselfowuni, IZowuni YeXesha LaseKhaya, IMini YeSolar, Ukubeka GPS, Ixesha LokuGcina IMini, Ixesha Lokwenene Lelanga, Ukutshona Kwelanga Kufutshane Nam
Ngaphezulu kweyure umahluko phakathi kwexesha lendawo kunye nexesha eliyinyani Lelanga kuba ixesha lokonga emini.